Ọrụ - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Fọdụ na-adịbeghị anya Projects
Aha oru ngo ： 110 kV ikike nnyefe na ọrụ mgbanwe nke Shabao Agricultural Photovoltaic Power Station na Nayong County
Adress ： BiJie obodo, YunNan
Ugwu ugwu -110kV 2020.09
Ọhụrụ ewu nke 110kV akara site na Quxian Xicheng ka Langya, Waya: JL / G1A-300 / 40-24 / 7 ígwè isi aluminum tọrọ atọ waya, ala waya: JLB20A-80, OPGW-24B1-80. Total ogologo nke akara bụ 29KM, n'akuku ígwè ụlọ elu bụ 90 bases, Toatl arọ bụ 550 tọn. Edere iwu ahụ na Septemba 2020 ruo mgbe nnyefe ya na Ọktoba 2020, na usoro a bụ ụbọchị 35. E tinyela ya n'ọrụ na mbido December 2020.
Ugwu ugwu - 220kV 2020.6
Huarun Yuexi Sigan Baozu 84MW Wind Power Project 220kV otu akara oru, Waya: JL / G1A-300 / 40-24 / 7, Waya ala: OPGW-24B1-80. Total ogologo nke akara bụ 19.35KM, Total nke n'akuku ígwè ụlọ elu bụ 45 tent, Total arọ bụ 680 tọn. Edere usoro ahụ na May 2020 iji nyefee na June 2020, na oge mmepụta bụ ụbọchị 25. A ga-etinye ya n'ọrụ na mbido November 2020.
Ugwu ugwu -35kV 2020.5
Maka ọrụ owuwu ohuru site na 110kV Wumu Station na Longyanjing 35kV na Suining, Sichuan, waya jiri JL / G1A-300/25 na waya waya jiri OPGW-24B1-50. Total ogologo nke akara bụ 9.5KM, n'akuku ígwè ụlọ elu na ígwè anwụrụ poolu bụ 30 bases, Total arọ bụ 260 tọn. Edere iwu ahụ na Eprel 2020 iji nyefee na Mee 2020, na usoro a bụ ụbọchị 25. E tinyela ya n'ọrụ na August 2020.
Ebe dị elu dị elu 110kV 2020.1
Emeputara ohuru a na Wangda ~ Bitu 110kV, obodo Zuogong, Tibet, onye ndu JL / G1A-185 / 35-26 / 7 akara ala GJ-70, ngụkọta ogologo nke ahịrị bụ 126KM. ụlọ elu bụ 311 tent, Total arọ bụ 3150 tọn. O were ụbọchị 90 ka e debanyere iwu ahụ na Ọktọba 2019 ruo na mmecha nke nnyefe nke ụlọ elu ahụ na Jenụwarị 2020, wee tinye usoro ahụ niile na August 2020.
Mpaghara General –220kV 2019.12
General ebe: Mongolia, ọhụrụ ewu nke 110k abụọ loops na onye ọrụ n'akụkụ nke Mongolia oru ngo. Waya ： JL / G1A-240 / 30. Ala ikuku: OPGW-24B1-80. Mkpokọta ogologo nke akara bụ 11KM, Total ibu: n'akuku ígwè ụlọ elu bụ 35 tent. Total arọ: 483 tọn. Edere iwu ahụ na Septemba 2019, oge mmepụta bụ ụbọchị iri abụọ na abụọ. E tinyela ya n'ọrụ na mbido Machị 2020.